ESAT Afaan Oromo – Page 75 – ESAT Afaan Oromo
Walitti bu’insa dhihoo kana Gaambeellaatti umameen wal qabatee mootummaan Birtaaniyaa aanaalee afur naannichatti argamu keessatti akka hin imalle hubachiise. Haala nageenya yeroo fi dhimmoota lammii Itoophiyaa keessa jiruun lammille isaatiif oddeeffannoo kan kenne ministeerri dhimma alaa Biritaaniyaa naannoo Gaambeellaatti bakkeewwan kanaan dura walitti bu’insi ture ammas sodaa rakkoo nageenyaa ta’uu isaa ibseera. Naannoo Gaambeellaa godina Niweeri jalatti kan argaman aanolee ...
Torban darbe Ameerikaa bulchiinsa Varjiiniyaatti ugguramuu midiyaa fi sochii uummataa mata duree jedhuun saatalaayitii raadiyoo fi televizyiin Itoophiyaatiin (ESAT) fi BBN mariin uumataa gaggeefame. Gaafa guraandhala 7 /2016 marii uummataa gaggeefame kana irratti dhimmi mata duree kana irratti beektootni qorannoo gaggeessan bakka bu’ootni ESAT fi BBN akkasumas bakka bu’ootni koreen mormitoota mirga gaazexeessitoota (SPJ) hasawaa taasisaniiru. Bakka bu’oota koree mirga ...
Kaleessa maskiida Annuwaaratti kadhannaa booda mormiin taassifame.
Maskiida Annuwaai magaalaa Finfinneetti argamutti jimaata kalleessaa guyyaa sagantaa kadhannaa booda mormiin taassifameera. Mormii akka tasaa taassifame kan jedhame mormii maskiida Annuwaaritti gaggeefame kanaan musliimootni lakkofsa hedduu qaban dhaadannoo garaagaraa dhageessisaa ooluu isaa ragaan biyyaa arganne ni mul’isa. Cunqursaan biyyoollesaa haadhaabbatuu fi miseensonni koree haa hiikaman dhaadannoon jedhu namoota hedduu harkatti mul’achuun isaa ibsameera. Waggoota sadan darbanii kaasee hawaasni musiliimaa ...